Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Isbedalka Geeska Africa & Doorka Ay Soomaalida Ogadenya Ku Leedahay.
Maqaal: Isbedalka Geeska Africa & Doorka Ay Soomaalida Ogadenya Ku Leedahay.
Isbedalka ka socda guud ahaan Geeska Africa saamayn wayn ayuu ku leeyahay shacabka Soomaalida Ogaadeeniya. Hadaba waxaa is-haya labo kooxood ama qaybood oo ku hardamaya dhulka Soomaalida Ogaadeeniya waxayna kala yihiin:-
Q1aad. Kooxdii TPLF (Tigrey) & Taageeroyaashooda.
Tigrey waxa uu hoggaaminayay gumaysi cusub waxaa la safnaa dad badan oo ku noolaa dhiiga shacabka. Soomaalida la safnayd Tigree waxay ku naaxeen dhiiga shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan halyay’yada Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya ee ONLF.
Q2aad: ONLF iyo Taageeroyaashooda
Waxaa guulaystay xulafadii ONLF oo ahayd isbadal doon. Xulafadaas waxay ahaayeen Shacabka Soomaaliyeed ee gumaysi diidka ah. Shacabka Eritrea, Qowmiyada Oromada iyo qowmiyadaha Itoobiya ku hoos dulman oo idil. Waxaa laga soo horjeeday gumaysiga cusub ee Abysiniya ee Tigray hoggaaminayay.
Maanta waxaa guulaystay saaxiibadii shacabka Soomaaliyeed ee xaq-udirirka ahaa. Hadaynu nahay soomaalida Gumaysi diidka ah waa soo dhawaynaynaa isbadalka ka dhashay Itoobiya. Itoobiyada maanta ma’aha cadow Soomaaliyeed. Itoobiyada maanta maaha tii aan qoriga isku ridaynay. Inkastoo wali muuqii Itoobiya wali joogo cadowgiina aan laga adkaan oo fikirkiisii iyo laf ahaantoodiiba ay joogaan.
Waa inaan ka shaqayno sidii isbadalkan cusub u noqon lahaa mid Soomaali ku hesho xaqii iyo xuquuqdii ka maqnayd. Waa in aan ka shaqayno sidii gumaysi looga adkaan lahaa. Had iyo jeer bulshadu siyaasada waa lagu kala gadisanyahay duruufaha siyaasi ee jira awgeed. Laakiin waxaan ahayn dad isku hadaf ah oo gumaysi diid ah.
Jabhada ONLF kuwa u haysta in wali duurka ay ku jirayso oo qori iyo xabad ay sii wadayaan waa dad kamid ah hadhaagii gumaysigii Tigrayga oo aan la soconin xaqiiqda jirta. ONLF isbadalka Geeska Afrika iyada ayaa keentay. Hadii cid ka faa’iidaysanayso isbadalkan waxaa marka 1aad iyo marka 2aad iyo 3aad ka faaidaysan doona shacabka Soomaaliyeed ee gumaysiga ku hoos jirtay.
Bulshada Soomaaliyeed waxaan ku dhiiri galinayaa inay ururka ONLF kala shaqayso sidii bulshadaas dulman u heli lahayd aayahooga waa in laga hortago kala qaybsanaanta iyo tafaraaruqa bulshada. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaa saaran waajib innuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliyeed. Qof walba oo Soomaaliyeed waxa uu xaq u leeyahay innuu helo xuquuqdiisa oo buuxda iyo inuu si xor ah u noolaado. Si taas loo helo waa in aan iscafinaa dhamaanteen lagana wada shaqeeyo waxa danta u ah dadkeena iyo dhulkeena iyo diinteena.
JWXO marna qofkale u daba fadhiisan mayso xaqa iyo xuquuqda shacabkeeda.
W/Q: Musdhafe Cagawayne